FutureLink, Author at Future Link
Posts by FutureLink
ယနေ့ခေတ်၌ မရှိမဖြစ်အရေးပါဆုံးအရာတခုဖြစ်နေသော Information Technology ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်သောအကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးပေးသွားမည်
By FutureLink | September 22, 2018 | 0
⭐ သင်ဟာ IT ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး စတင်လေ့လာနေသူတစ်ယောက်လား ? ⭐ IT ပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး ပညာရှင်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆို သိချင်ပါသလား ? ⭐ နိုင်ငံတကာမှာ IT ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ပုံစံကိုရော လေ့လာချင်ပါသလား ? အထက်ပါ အချက်တွေသိရှိရန် Singapore နိုင်ငံရှိ James Cook University တွင် IT ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးနေသော Dr. Shailey Chawla Lecture Information Technology Doctor of Philosophy (PhD), University of Delhi, 2010-21016; Master of Philosophy (Computer Science), Madurai Kamaraj University,…
Pilot တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လိုသူနှင့် ​လေယာဉ်မောင်/မယ် ဖြစ်ချင်သူများအတွက် အကြီးမားဆုံး အခွင့်အရေး
By FutureLink | July 10, 2018 | 0
✈️ လေကြောင်းလိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို စိတ်ဝင်စားသူ၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်ဝင်ချင်သူများအတွက် စာလည်းသင်၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံလည်း ရရှိနိုင်မယ့် Airline Business Management ဘာသာရပ်ကို STAMFORD International University မှ သင်ကြားပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ STAMFORD ဆိုတာ ⭐ LAUREATE နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်သော တက္ကသိုလ်တခုဖြစ်သလို ထိုင်းနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များထဲမှ ပထမဆုံး စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော တက္ကသိုလ်တခုဖြစ်တဲ့ Stamford ဟာဆိုရင် RAMA 9, ASOKE, HUA HIN စသည့် Campus (၃) ခုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားကာ သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော တက္ကသိုလ်တခုပါ။ ⭐ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော တက္ကသိုလ်ဖြစ်သော်လည်း USA, UK, Canada, France,…
ဆေးကျောင်း ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျမသွားပါနဲ့
ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျမသွားပါနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အခွင့်အရေးရှိနေပါသေးတယ် “ဆရာဝန် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်” ဆိုပြီး စာလေ့လာကြိုးစားခဲ့သော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ၁၀ တန်း အမှတ်စာရင်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမှတ်နည်းသွားခဲ့လို့ “ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့် မရတော့ဘူး” ဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်မကျသွားပါနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဆရာဝန်တဦး ဖြစ်လာအောင် PSB Academy မှာတက်ရင်း ပြန်ကြိုးစားဖို့ရန် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အခွင့်အရေး ရှိပါသေးတယ်နော် ဒါ့အပြင် ဆေးပညာနယ်ပယ်ဟာ အလွန်ကျယ်ပြန့်တာကြောင့် ဆေးကုသပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်တဦး မဖြစ်ရင်တောင် ဆေးပညာကိုနားလည်မယ့် နည်းပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ များစွာ လိုအပ်နေဆဲပါ 💡ဆေးဝါးတခုဟာ အရည်အသွေး ကောင်း မကောင်း ဘယ်လိုစစ်မလဲ? ဒီဆေးဝါးသုံးစွဲသူတွေအတွက် ထိရောက်မှုရှိ မရှိ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များ မများ ဆိုတာကော ဘယ်လိုစစ်မလဲ? 💡ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်နိုင်မယ့်…
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်(၁၀)ခုမှာ အပါအဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ UCLA, UPENN, MIT, Columbia University အစရှိသည့် တက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး လမ်းကြောင်းများ
By FutureLink | April 30, 2018 | 0
ကွန်မြူနတီကောလိပ်ဆိုတာဘာလဲ ? ကွန်မြူနတီကောလိပ်ဆိုသည် – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အကြီးမားဆုံးပညာရေးစနစ်ဖြစ်​ပြီး အမေရိကန်ကျောင်းသား၅၀% သည် သူတို့၏တက္ကသိုလ် ပညာရေးကို ထိုကောလိပ်များမှ စတင်ခဲ့ကြပါသည်။ အထက်တန်းအောင်ကျောင်းသားများသည် ကွန်မြူနတီ ​ကောလိပ်များတွင် ပထမ(၂)နှစ်ပညာသင်ကြားပြီးနောက် ဘွဲ့ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များတွင် နောက်ထပ်(၂)နှစ် ပညာသင်ကြားပြီး စုစုပေါင်း(၄)နှစ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်မြူနတီကောလိပ်ရဲ့အားသာချက်များမှာ – ✅ ပညာသင်စရိတ် သက်သက်သာသာဖြင့် ပညာရေးနှင့် အသက်မွေးမှု ပညာရပ်များကို သင်ယူနိုင်ခြင်း၊ ✅ ပထမနှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်​ ​လျှောက်ထားရန်ခက်ခဲသော်လည်း ကွန်မြူနတီကောလိပ်မှ တဆင့် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်​။ . . 🍊 Orange Coast College က်ာလီဖိုနီးယားပြည်နယ်၊ ကော်စတီမီဆာမြို့(Costa Mesa)ရှိ Orange Country (စီရင်စု) တွင်တည်ရှိသည့် OCC ကို 1948…
Depression (စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း) ခံစားရကာ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှု များပြားနေသည့် ယနေ့ခေတ်တွင် စိတ်ကို ကုသပေးနိုင်မည့် စိတ်ပညာရှင် (Psychologists) များစွာလိုအပ်နေ။
By FutureLink | March 14, 2018 | 0
စိတ်ပညာ (Psychology) သည် လူများ၏ စိတ်၊ အပြုအမှုတို့ကို လေ့လာပြီး အလွန်အသုံးဝင်သော၊ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသော ဘာသာရပ်တခုဖြစ်ပါသည်။ Psychology ဘာသာရပ်ကို သင်ယူသူ အရေအတွက်မှာ US တွင် 32% ၊ Australia တွင် 35% ရှိပြီး US တွင် Psychologists တယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူ စုစုပေါင်း ၃သောင်းကျော်နှင့် Australia တွင် ၂သောင်း ၅ထောင်ကျော်ထိ ရှိနေသည်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လှုမှုရေးသာမက ပညာရေးနယ်ပယ်၊ အနုပညာနယ်ပယ် အစရှိသည့် နိုင်ငံတိုင်း၏ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တိုးတက်မှုနှုန်း၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ လူအများမှာ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို ခံစားနေရကြသည်။ ထိုသို့သောသူများ Depression ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သည့်အဆင့်ထိ…